Mametraka ny mpanjono voalohany
Mino ny herin'ny mpanjono madinika izahay hanova ny fiarovana ny morontsiraka, ary hametraka azy ireo ho ivon'ny zavatra rehetra ataonay.
Miasa any amin'ny toerana tena iankinan'ny ranomasimbe ho an'ny kolontsaina sy ny toe-karena eo an-toerana izahay, dia manolo-tena amin'ny fampandehanana ny fiarovana an-dranomasina ho an'ny olona izay miankina amin'ny ranomasina mba ho velona.
Ny hetsika voalohany ataontsika miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina mpanjono dia ny mihaino. Mihaino isika ary mianatra, ary fantatsika izay zava-dehibe. Izahay dia manome azy ireo vahaolana mifanaraka amin'ny filan'ny fiaraha-monina maharitra, miatrika ny fanjonoana tafahoatra ary mitondra fiovana maharitra.
2 Fiarovana ny zo
3 Mpanamory sy manatsara
4 Fanamafisana ny angon-drakitra
5 LMMAs & Fitantanana
6 Fampidirana ara-bola
Fiantohana ny zo, fanamafisana ny fitantanana
Miompana amin’ny fiarovana ny zon’ny mpanjono izahay. Io no fototry ny asantsika ary fototry ny fanatsarana ny fitantanana, ny fampitomboana ny fivelomana eo an-toerana ary ny famerenana ny fiainana an-dranomasina.
Miaraka amin'ny zo, manohana ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka izahay mba hanara-maso ny jono. Ny mpanjono eo an-toerana dia manangona angon-drakitra amin'ny alàlan'ny finday ary mampifanaraka ny zavatra hitany amin'ny sehatra an-tseraserantsika, izay handikana azy ireo, fintinina ary averina amin'ny vondrom-piarahamonina haingana araka izay tratra.
Fomba iray mametraka ny angon-drakitra — sy ny fanapahan-kevitra — eo am-pelatanan'ny mpanjono eo an-toerana, manova ny fidirana amin'ny vaovao ary manome hery azy ireo hitantana sy hanorina indray ny jono.
Ny fitantanana ny tenany matetika dia manomboka amin'ny fitsabahan'ny mpanamory amin'ny ambaratonga kely izay manome tombony tsotsotra, nefa azo tsapain-tanana, haingana ho an'ny vondrom-piarahamonina mpanjono nentim-paharazana. Ireo “catalysts” ireo koa dia manampy amin'ny fametrahana ny fototra ho an'ny fiarovana an-dranomasina midadasika kokoa sy fatra-paniry laza — matetika faritra an-dranomasina tantanan'ny faritra (LMMA), faritra ranomasina tantanin'ny vondrom-piarahamonina, ho an'ny vondrom-piarahamonina.
Miorina amin'ireo fototra ireo izahay miaraka amin'ny fanohanana mifanaraka amin'ny fanatsarana ny fivelomana eo an-toerana. Manampy ny mpanjono hivezivezy amin'ny fanamby amin'ny fiovaovan'ny fidiram-bolan'ny jono izahay ary manome izay rehetra ilainy hanatsarana ny tamberim-bolany. Omentsika fitaovana sy fahaiza-manao ilainy izy ireo mba hampihenana ny fahasimbana, hanatsara ny kalitao ary hahatratra ny tsena tsara kokoa.